नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : जब कमल थापाले संबिधानसभामा मै प्रचन्ड बाबुराम कृष्ण सिटौलाहरुलाई उनिहरुकै अगाडि रातो मुख हुन्जेल यसरी ललकारे ! हेर्नुस यो भिडियो ।
जब कमल थापाले संबिधानसभामा मै प्रचन्ड बाबुराम कृष्ण सिटौलाहरुलाई उनिहरुकै अगाडि रातो मुख हुन्जेल यसरी ललकारे ! हेर्नुस यो भिडियो ।
कमल थापाले संसदमा यसरि थर्काए, सत्य बचन तितो हुन्छ
Posted by Jhapa-झापा on Thursday, August 27, 2015